ဘယ်အချိန်မှာ ရေချိုးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ?
ရေချိုးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်...
တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ပဲ ရေချိုးရမယ်ဆိုရင် မနက်ပိုင်းမှာချိုးမလား၊ ညပိုင်းမှာချိုးမလား? ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်ကတော့ ကောင်းနေမှာပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကတော့ ညဘက်ရေချိုးခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
နန်စီရော့သ်စတိုင်းဟာ သူမကိုယ်သူမ The Sleep Ambassador (အိပ်စက်ခြင်းသံအမတ်)လို့ အမည်ပေးထားပြီး လူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိပ်စက်နိုင်ဖို့နဲ့ အိပ်စက်မှုပုံမမှန်တာတွေကို သတိပြုမိစေဖို့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ညအိပ်ခါနီး ရေချိုးခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတယ်လို့ နန်စီက ပြောပါတယ်။ သူမကတော့ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒါဆိုရင် မနက်ပိုင်းရေချိုးတဲ့အခါ ကောင်းကျိုးမရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ Yale ဆေးကျောင်းရဲ့ အရေပြားဗေဒ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Mona Gohara ရဲ့ အဆိုအရတော့ မနက်ပိုင်း ရေချိုးခြင်းဟာ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတာမို့ ရုံးမှာအလုပ်များများလုပ်ရသူတွေဟာ မနက်ပိုင်းရေချိုးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မနက်ပိုင်းရေချိုးခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ ကော်တီဇော (cortisol)ဟော်မုန်းကို ထိန်းပေးထားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အရေပြားအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးဖြစ်စေပါသတဲ့။
မနက်ပိုင်းရေချိုးခြင်းနဲ့ ညဘက်ရေချိုးခြင်းမှာ ဘယ်အရာက ပိုကောင်းသလဲဆိုတာကတော့ ခုချိန်ထိအောင် ပြောဖို့ခက်နေပါသေးတယ်။ မနက်ပိုင်းရေချိုးရင် စိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီး ညဘက်ရေချိုးရင်တော့ လူကိုအနားပိုရစေပါတယ်။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ပဲ ရေချိုးရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်အလိုက် မနက်ပိုင်းဖြစ်စေ ညပိုင်းဖြစ်စေ ရွေးလိုက်တာကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။